USolwazi Mariza Vorster.
USolwazi Mariza Vorster unikwe isikhundla sokuba yiNhloko Emkhakheni we-Nuclear Medicine e-UKZN. U-Vorster unguSolwazi omncane eNyuvesi kanti useMnyangweni we-Nuclear Medicine e-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital. UnguMongameli we-Colleges of Nuclear Physicians kanti futhi usekomitini eliphethe i- Examinations and Credentials Committee ye-Colleges of Medicine of South Africa (i-CMSA).
Waba yi-nuclear medicine physician ngonyaka wezi-2010 eNyuvesi yasePitoli. Wathola iziqu zobudokotela kulomkhakha kulenyuvesi ngowezi-2014 ngocwaningo lwakhe lokusebenzisa i-68Ga-citrate PET, wabangowesifazane wokuqala ukuba ngudokotela kulomkhakha eNingizimu Afrika. Ungusosayensi osohlwini le-NRF obhale futhi wabhala ngokuhlanganyela amaphepha ocwaningo ahlaziywe ngabalingani bakhe evile ekhulwini, okukhona izahluko eziningi zezincwadi zokufundisa.
U-Vorster ungumuntu othanda ukuqeqesha ongoti abafunwa ubuthaphuthaphu emhlabeni wonke nokuphucula isimo somkhakha ezweni. Ezingeni lomhlaba wonke useke wabambisana ne-International Atomic Energy Association (i-IAEA) emikhankasweni eminingi kanti uke wabayingxenye yokudidiyela nokufundisa ezithangamini ezihlukene zama-radiographer nama-nuclear physician e-Afrika jikelele.
Phakathi kwezinto athanda ukuzicwaninga kukhona ama-Ga-68-based tracer applications nama-theranostics ahlose ukuxazulula izinkinga ezimqoka zezempilo.
U-Vorster ufisa ukuletha ushintsho olubonakalayo ezinselelweni zokuhlola okungezaseNingizimu Afrika ngendlela eyongayo. Ufisa ukuqeqesha ongoti abalungele umsebenzi, akhulise lomkhakha KwaZulu-Natal, enze ucwaningo lwezinto ezithinta impilo ezweni.
Ukholwa wukuthi lokhu kungafezeka kuphela ngosizo lwethimba elinamandla kanti unezinhlelo zokubambisana neminyango engabalingani kwezinye izifundazwe, aqinise amaxhama okuxhumana nongoti balomkhakha nongoti abazimele.
‘Ngithanda ukufundisa nokucwaninga, ikakhulu uma ucwaningo luzoshintsha ukuphathwa kweziguli ngendlela ebonakalayo nenhle. Ngimagange ukubona ozakwethu abasha e-UKZN futhi ngifisa ukuthi sibambisane emikhankasweni eminingi ezosiza iziguli zethu kangcono. Ithuba lokuphatha umnyango belingeke livele ngaphandle kothando, ukwesekwa, ukukhuthazwa ngabantu abaningi empilweni yami. Ikakhulu, ngifisa ukubonga umyeni wami, umndeni wami nothisha wami oyisibani sami uSolwazi Mike Sathekge,’ kusho u-Vorster.